ESAT Afaan Oromo - Page 42 of 58 - ESAT Afaan Oromo
Atleet Miruuts Yifxar du’aan Addunyaa kanarraa boqate.
Atleetii beekamaan Ityoophiyaa kumaalaa Miruuts Yifxar dhalatee waggaa 72tti Kanaadaa Tooroontootti addunyaa kanarraa du’aan boqateera. Atleetii beekamaan kun ji’oottan darban rakkoo fayyaa isa mudateen Kanaadaa Toorontootti waldhanamaa kan ture yoo ta’u, mudde 14,2009 boqachuu isaa xalayaa gaddaa Federeeshiniin Atleetiksii Ityoophiyaa miidiyaalee Ispoortii biyya keessaaf ergerraa hubachuun danda’ameera. Atileet Miruuts waldorgomii bara 1964 magaalaa Muuniikitti qophaa’e fiigicha meetira kuma 10n dorgomuun ...
Pirizedaantiin Gaambiyaa karaa nagaatiin yoo aangoo gad hin dhiisne humna waaraanaatti akka fayyadamu Jaarmiyaan Hawaasaa Diingdee Afriikaa Dhihaa beeksiise.
Filannoo Pirizedaantummaa akka lakkoofsa warra faranjootaa mudde 1 filatameen Pireezdaantiin Gaambiyaa Yayyaa Jaameeh morkataa isaaniitiin injifatamuun aangoo Pirizedantummaa waggoota 22f irra turan dhabaniiru. Waggoottan 22n darban biyyattii bulchaa kan turan pirizedant Jaameeh, tamsaasaa televizhinii biyya isaaniitiin Injifatamuu isaanii beeksisanii turan. Haa ta’u malee, foddaa televizhiinii biyyattiin injifatamuu isaanii beeksisanii yaada isaanii jijjiiruun bu’aa filaannichaa hin fudhadhu jechuun hawaasa addunyaa ajaa’ibsiisaniiru. ...
Sirni Awalchaa ogeessa seeraa beekkamoo Obboo Tashoomaa Gabramaariyaam raawatameera
Sirni Awalcha ogeessaa seeraa beekkamoo obboo Tashoomaa Gabramaariyaam Bataskaanaa warraa Ortodksii Sillaassee Katederaaliitti raawwatameera. Obboo Tashoomaa Gabramaariyaam waggaa 86 tti tasa du’aan addunyaa kanarra boqatan. Obbo Tashoomaan bara Mootummaa Hayilasillaasee Abbaa Alangaa Waliigalaa akkasumas Ministiir Dee’eetaa Minsteera Albuudaa ta’uun hojjataniiru. Mootummaan Haayilasillaasee angoo irraa wayita bu’u qondaltoota mootummaa hidhaman keessa tokko turan. Obboo Tashoomaa waggoota saddeetiif erga hidhamanii gadii dhifamanii ...
Itoophiyaa keessatti lakkofsi Gaazexxestoota yakkaa Shororkessuummaan himatamanii hidhamanii dabalaa dhufuun yaaddeessaa akka ta’e Dhaabbanni Mirga Gaazexxestootaaf Falmu beeksiiseera.
Manni Murtii Federaalaa murtiin yakka himaannaa shororkeessummaan Gaazexxestoota lama irratti murteessee Itoophiyaa keessatti gocha Ukkamsuu Gaazeexxestoota kan mul’isuu akka ta’ee dhaabbanni Committee to Protect Journalist(CPJ) jedhamu beeksiiseera. Itti-Aanaa Hogganaa dhaabbatichaa Robart Mahoonii tarkaniiffiin Gaazeexxeessa Kaaliid Mohammaad fi Darseemaa Soorii akkasumas gaazeexxestoota biraa irratti fudhatamu hatattaamaan dhaabbachuu akka qabu Mootummaa Itoophiyaatiif waamicha dhiyeessaniiru Manni murtii Federaalaa Gaazeexxestoota laman dabalatee namoonni 20 ...
Lakkofsi Turistoota Itoophiyaa daawwatanii fi galiin damee kanarra argamu foyya’uu dhabuun akka isa yaaddeesse Ministeerri Aadaa fi Turiziimii beeksiiseera.
labsii yeroo hatattaamaa labsamee wajjiin wal qabatee lakkofsi turistoota Itoophiyaa daawwatanii baay’ee akka xiqqatee himameera. Ji’oota sadeen darban lakkofsi turistoota Itoophiyaa daawwatanii xiqqachaa akka dhufe qondaltoonni ministeera Aadaa fi Turiziimii miidiyaalee biyyaa keessatti himaniiru Bara darbe turistoonni biyyoota gara gara kuma 900 ol Itoophiyaa daawwataniiru. Turistoota waggaa darbee biyyaatti daawwataniirra galiin dolaarii biiliyoona sadii ol akka argamee Ministeeriich beeksiiseera. Haala ...
Morokoottii Kampaaniin Sheek Mahammad Huseen Al-Amuddiin Boba’aa Qulqulleessuu Mana Murtiin akka diigamu itti Murta’eera
Morokootti Kampaaniin hojii boba’aa qulqulleessuu irratti bobba’ee kampaanii Samiir Gurupp jedhamu qofa. Kampaaniin Sheek Mahammad Huseen Al-Amuddiin Koraal Peteroliiyaam Holdinigiis jedhamu Kampaanii Samiir Girupp kana keessa gahee dhibbentaa 67 waan qabuuf olantummaa bulchaa akka ture gabaafameera. Kampaaniin Samiir Gurupp Al-Amuddiin gahee dhibbeentaa 67 keessa qaban kun rakkoo maallaqaa isa muuddateen ji’a Adooleessa darbee jalqabee hojii dhaabeera. Mannii Murtii Morookoo rakkoo ...
Pirizidaantiin Ugandaa fi Ijipt geejjiba saffisaa laga Naayeel Ugandaa hanga gaalaana Meditereniyaanii gahuu wajjiin fayyadamuuf waliigaltee mallatteessaniiru.
Walgalteen geejjiba saffisaa laga Naayeel Ugandaadhaa hanga buufata doonii Aleksizandariiyaa gahu kun baasii meeshaalee gara biyyaa alaatti ergamanii fi Alaa galaniif bahu hir’isuuf akka gargaaru himameera. Biyyoonni Laman walgaltee kana kan mallatteessan Pirizidaantiin Ijipt Abdul Fattaa Al- Siisii tibbaana Ugandaa wayita daawwataniitti ture. Waliigalteen kun filannoo sarara geejjibbaa biroo laga Naayeel irraatii biyyoonni laman wajjiin itti fayyadaman akka ta’e pirizedaantiin ...
Kampaaniin Masfiin Injinaariin warshaa Konkolaataa Peejoo magaalaa Finfinnee Eebbisiiseera.
Qabeenya Paartii Addaa bilisaa baasaa Ummataa Tigraay kan ta’ee Kampaaniin Masfiin Injinaariingiin warshaa konkolaataa Peejoo lammaaffaa magaalaa Finfinneetti hundeessera. Kampaaniichi kana dura Itoophiyaatti Ambasaddaar Faransaayii bakka argamanitti Warshaa naannoo Tigraayitti hundeessee eebbisiisun isaa ni yaadatama warshaan konkolaataa Peejoo magaalaa finfinneetti hundeeffame kun waggaatti konkolattoota Peejoo kuma tokkoo fi dhibba lama akka omishu toori oduu interneeti bulchiinsa mootummaa Waayyaannee deeggaru tokko ...
Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti jirattoonni manni isaanii maqaa misoomaatiin jala diigame mootummaan waada nuuf gale hin kabajne jechuun komatan
Bulchiinsa magaala Finfinneetti, jiratoonni naannoo Amerikaan Gibbii jedhamuu beekamu jiiratan mannii isaanii maqaa misoomaattin jala akka diigamee himaniiru. Mootummaan lafa mana itti ijaaratn jijjiraan akka isaaniif kennuu waada galuus hanga ammaatti hojiirra oolchuu hin dandeenye jechuun komatan Waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa isaanii mirkaaneessuu akka qaban Jiiratoonni kunniin himaniiru. Lafti mana irratti ijaaratan jijjiraan waan isaaniif hin kennamneef rakkoolee hawaasummaaf saaxilamusaanii ...
Naannoo Gambeellatti dhaabbilee maqaa misoomaatiin lafa fudhatan keessa 29 bakki isaan jiran hin beekamu jedhameera.
Naannoo Gambeellaatti dhaabbilee maqaa Invastimantii qonnaatiin lafa fudhatna keessaa 29 eessaa akka jiran akka hin beekamne koreen haala kenninisa lafa fi rakkoo jiru akka qoratuuf hundeeffamee beeksiiseera. Naannichaatti abbootii qabeenyaa 623 lafa invastimantii Qonnaa fudhatan keessaa lafa heektara kuma 45 ol abbootii qabeenyaa 381f wal irratti akka kennameef koreen kun mirkaneesseera Abbootiin qabeenyaa lafti wal irraatti kennameef Baankii Misoomaa fi ...